ဆယျစုနှဈတဈခုနီးပါးအတှငျး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဟာ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲကစားခှငျ့ဆုံးရှုံးရတော့မှာလား? – the One Sports Journal
စီးရီးအခေနျြပီယံဆုကို (၉)နှဈဆကျ၊ စီးရီးအပွေိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံးအသငျး၊ စီရျောနယျလျဒိုလို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားမြိုး ပါဝငျကစားနတေဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဟာ လာမယျ့ရာသီခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ရဖို့ မသခြောတဲ့အနအေထားနဲ့ ရငျဆိုငျရလိမျ့မယျလို့ ဘယျသူကထငျမိမှာလဲ။
သူတို့ရဲ့ လကျရှိခနျြပီယံဂုဏျပုဒျကို အဓိကပွိုငျဘကျတဈသငျးဖွဈတဲ့ အငျတာမီလနျအသငျးဆီ လှဲပွောငျးပေးခဲ့ရသလို ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့နဲ့ပါ လှဲခြျောခဲ့မယျဆိုရငျတော့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးအတှကျ ကွီးမားတဲ့ထိုးနှကျခကျြတဈခုဖွဈလာမယျဆိုတာ အသအေခြာပဲ။
ကစားသမားဘဝတုနျးက ဂြူဗငျတပျဈအသငျးအတှကျ အောငျမွငျမှုအလီလီရယူပေးခဲ့တဲ့ ပီယာလိုကတော့ နညျးပွဘဝအဖှငျ့မှာပဲ ရိုလာကိုစတာခရီးစဉျကို ကြျောဖွတျနရေပွီး သူ့လကျထကျမှာ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ရအောငျ မစှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ရငျတော့ ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီနောကျပိုငျး ဆယျစုနှဈတဈခုနီးပါးအတှငျး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဟာ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲကစားခှငျ့ဆုံးရှုံးရတော့မှာလညျးဖွဈတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ နဂိုကတညျးကမှ ထိုငျခုံလှုပျနတေဲ့ ပီယာလိုအတှကျ စီးရီးအရောသီပိတျပှဲဖွဈတဲ့ ဘိုလော့ဂျနာနဲ့ပှဲဟာ သူ့ရဲ့နညျးပွဘဝအဆုံးအဖွတျပှဲဖွဈလာနိုငျသလို နာမညျကြျောကစားသမား စီရျောနယျလျဒို ဂြူဗငျတပျဈအသငျးမှာ ဆကျရှိ၊ မရှိဆိုတာကို အဆုံးအဖွတျပေးမယျ့ပှဲလို့လညျးပွောရမယျ။
စီရျောနယျလျဒိုဆိုတာက အောငျမွငျမှုတှကေို အမွဲဆာလောငျနတေဲ့သူဖွဈတဲ့အတှကျ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမကစားရရငျ အသငျးနဲ့လမျးခှဲဖို့က ရာနှုနျးပွညျ့သခြောနပေါပွီ။
အခုအခြိနျမှာတော့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဟာ (၇၅)မှတျနဲ့ အဆငျ့(၅)နရောမှာရပျတညျနပွေီး သူ့အပျေါက နာပိုလီ၊ အစေီမီလနျတို့နဲ့ (၁)မှတျသာကှာဟနလေို့ မြှျောလငျ့ခကျြခပျပါးပါးတော့ရှိနသေေးတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ နာပိုလီအသငျးက အမှတျပေးဇယားအလယျအလတျမှာ ရပျတညျနတေဲ့ ဗီရိုနာကို အိမျကှငျးပှဲကစားရမှာဖွဈလို့ အမှားအယှငျးမရှိနိုငျပမေယျ့ အစေီမီလနျအသငျးကတော့ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ရဖို့ အခွအေနကေောငျးနတေဲ့ အတ်တလနျတာကို အဝေးကှငျးမှာသှားကစားရမှာဖွဈတာကွောငျ့ အစေီမီလနျသာခွခြေျောခဲ့ရငျ ဂြူဗငျတပျဈတို့ အခွအေနကေောငျးသှားဖို့ရှိတယျ။
တဈခုရှိတာကတော့ စီးရီးအမှောက Head To Head ကို အရငျကွညျ့ပွီး ရလဒျတူနမှေ Goal Difference နဲ့ဆုံးဖွတျတာဖွဈလို့ အတ်တလနျတာအသငျး အစေီမီလနျကို ရှုံးပွီး၊ နာပိုလီက ဗီရိုနာကို နိုငျ၊ ဂြူဗငျတပျဈက ဘိုလော့ဂျနာကို အနိုငျကစားခဲ့ရငျတောငျ အတ်တလနျတာနဲ့ဂြူဗငျတပျဈ (၇၈)မှတျခငျြးတူသှားမှာဖွဈပမေယျ့ Head To Head မှာ ဂြူဗငျတပျဈက အတ်တလနျတာကို အသာမရခဲ့တဲ့အတှကျ အဆငျ့(၅)နဲ့သာ ကနြေပျရမှာပဲ။
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဟာ အတ်တလနျတာကို အဝေးကှငျးမှာ (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ရှုံး၊ အိမျကှငျးမှာ(၁)ဂိုးစီသရသောကစားနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ အတ်တလနျတာအသငျးက Head To Head မှာ ဂြူဗငျတပျဈကို အသာရနတေယျ။
ဂြူဗငျတပျဈတို့ မြှျောလငျ့ရမှာက နာပိုလီ၊ အစေီမီလနျတို့ထဲကတဈသငျးခွခြေျောဖို့ပဲဖွဈပွီး ကိုယျတိုငျကလညျး ဘိုလော့ဂျနာကို အမှားအယှငျးမရှိအနိုငျယူဖို့ လိုနသေေးတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကတော့ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ရဖို့ နောကျဆုံးကောကျရိုးတဈမြှငျဖွဈတဲ့ ဘိုလော့ဂျနာနဲ့ပှဲကို မဖွဈမနအေနိုငျကစားဖို့ကွိုးစားမှာပဲ။
အဲဒါကွောငျ့ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ ပီယာလိုတို့ရဲ့အနာဂတျ၊ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ဂုဏျသိက်ခာကို အဆုံးအဖွတျပေးမယျ့ စီးရီးအဇောတျသိမျးပှဲမှာ ဘယျလိုရလဒျမြိုးထှကျပျေါလာမလဲဆိုတာကတော့ . . .
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်း ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကစားခွင့်ဆုံးရှုံးရတော့မှာလား?
စီးရီးအေချန်ပီယံဆုကို (၉)နှစ်ဆက်၊ စီးရီးအေပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် အောင်မြင်မှုအများဆုံးအသင်း၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုလို ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားမျိုး ပါဝင်ကစားနေတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ လာမယ့်ရာသီချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ မသေချာတဲ့အနေအထားနဲ့ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူကထင်မိမှာလဲ။
သူတို့ရဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံဂုဏ်ပုဒ်ကို အဓိကပြိုင်ဘက်တစ်သင်းဖြစ်တဲ့ အင်တာမီလန်အသင်းဆီ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရသလို ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်နဲ့ပါ လွဲချော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအတွက် ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ အသေအချာပဲ။
ကစားသမားဘဝတုန်းက ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအတွက် အောင်မြင်မှုအလီလီရယူပေးခဲ့တဲ့ ပီယာလိုကတော့ နည်းပြဘဝအဖွင့်မှာပဲ ရိုလာကိုစတာခရီးစဉ်ကို ကျော်ဖြတ်နေရပြီး သူ့လက်ထက်မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီနောက်ပိုင်း ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်း ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကစားခွင့်ဆုံးရှုံးရတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်။
အဲဒါကြောင့် နဂိုကတည်းကမှ ထိုင်ခုံလှုပ်နေတဲ့ ပီယာလိုအတွက် စီးရီးအေရာသီပိတ်ပွဲဖြစ်တဲ့ ဘိုလော့ဂ်နာနဲ့ပွဲဟာ သူ့ရဲ့နည်းပြဘဝအဆုံးအဖြတ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်သလို နာမည်ကျော်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းမှာ ဆက်ရှိ၊ မရှိဆိုတာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့်ပွဲလို့လည်းပြောရမယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဆိုတာက အောင်မြင်မှုတွေကို အမြဲဆာလောင်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမကစားရရင် အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့က ရာနှုန်းပြည့်သေချာနေပါပြီ။
အခုအချိန်မှာတော့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ (၇၅)မှတ်နဲ့ အဆင့်(၅)နေရာမှာရပ်တည်နေပြီး သူ့အပေါ်က နာပိုလီ၊ အေစီမီလန်တို့နဲ့ (၁)မှတ်သာကွာဟနေလို့ မျှော်လင့်ချက်ခပ်ပါးပါးတော့ရှိနေသေးတယ်။
ဒီအချိန်မှာ နာပိုလီအသင်းက အမှတ်ပေးဇယားအလယ်အလတ်မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ဗီရိုနာကို အိမ်ကွင်းပွဲကစားရမှာဖြစ်လို့ အမှားအယွင်းမရှိနိုင်ပေမယ့် အေစီမီလန်အသင်းကတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ အတ္တလန်တာကို အဝေးကွင်းမှာသွားကစားရမှာဖြစ်တာကြောင့် အေစီမီလန်သာခြေချော်ခဲ့ရင် ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ အခြေအနေကောင်းသွားဖို့ရှိတယ်။
တစ်ခုရှိတာကတော့ စီးရီးအေမှာက Head To Head ကို အရင်ကြည့်ပြီး ရလဒ်တူနေမှ Goal Difference နဲ့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်လို့ အတ္တလန်တာအသင်း အေစီမီလန်ကို ရှုံးပြီး၊ နာပိုလီက ဗီရိုနာကို နိုင်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်က ဘိုလော့ဂ်နာကို အနိုင်ကစားခဲ့ရင်တောင် အတ္တလန်တာနဲ့ဂျူဗင်တပ်စ် (၇၈)မှတ်ချင်းတူသွားမှာဖြစ်ပေမယ့် Head To Head မှာ ဂျူဗင်တပ်စ်က အတ္တလန်တာကို အသာမရခဲ့တဲ့အတွက် အဆင့်(၅)နဲ့သာ ကျေနပ်ရမှာပဲ။
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ အတ္တလန်တာကို အဝေးကွင်းမှာ (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ရှုံး၊ အိမ်ကွင်းမှာ(၁)ဂိုးစီသရေသာကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အတ္တလန်တာအသင်းက Head To Head မှာ ဂျူဗင်တပ်စ်ကို အသာရနေတယ်။
ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ မျှော်လင့်ရမှာက နာပိုလီ၊ အေစီမီလန်တို့ထဲကတစ်သင်းခြေချော်ဖို့ပဲဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘိုလော့ဂ်နာကို အမှားအယွင်းမရှိအနိုင်ယူဖို့ လိုနေသေးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ နောက်ဆုံးကောက်ရိုးတစ်မျှင်ဖြစ်တဲ့ ဘိုလော့ဂ်နာနဲ့ပွဲကို မဖြစ်မနေအနိုင်ကစားဖို့ကြိုးစားမှာပဲ။
အဲဒါကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ပီယာလိုတို့ရဲ့အနာဂတ်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် စီးရီးအေဇာတ်သိမ်းပွဲမှာ ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကတော့ . . .
The Fair Play award ကို ငါးနှဈဆကျတိုကျ ဆှတျခူးဖို့ မြားနပွေီ ဖွဈတဲ့ လီဗာပူး